Global Voices teny Malagasy » 2012 : Taonan’ny Fikomiana sy ny Fivoaran’ny Fiaraha-monina Any Amin’ny Firenena Mpiteny Frantsay (Frankôfôna) · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 11 Janoary 2013 7:10 GMT 1	 · Mpanoratra Rakotomalala Nandika Naomy
Sokajy: Afrika Mainty, Eoropa Andrefana, Frantsa, Kanadà, Mali, R.D. Kongo, Repoblikan'i Afrika Afovoany, Tchad, Ady & Fifandirana, Fahalalahàna miteny, Fampandrosoana, Fanabeazana, Fanoherana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fifindràmonina, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana, Politika, Saripika, Tantara, Toekarena sy Fandraharahàna, Vehivavy sy Miralenta, Voina, Vonjy Voina, Zon'olombelona
Lasa iny ny taona 2012, ary ho an'ny firenena mpiteny frantsay, irariana ny taona 2013 hitondra filaminana bebe kokoa.
Nanamarika ny taona 2012 ny ady mita-piadiana tao Mali , tao amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo  (RDC) [mg] sy tao amin'ny Repoblika Afrika Afovoany  (RCA), eo koa ireo fifidianana nampisy adi-kevitra goavana tao Senegaly  [mg], tao Quebec  [mg] sy tao Frantsa  [mg], sy ireo fiihetsiketsehana mitaky fanovana tao Tchad , Madagasikara [mg] sy tao Togo  [mg] ary koa ny olana ara-piarahamonina momba ny fifindra-monina  [mg], ny krizy ara-toekarena  sy ny mariazy ho an'ny rehetra ; izany rehetra izany dia noho ny fitadiavana fanovana lalina amin'ny fizaram-baovao.
Mba hiainana iny taona nitranga-javatra maro iny, indreto fizarana voalohany amin'ny tamberin'ny taona 2012 tao amin'ireo firenena mpiteny frantsay notontosain'ireo mpiara miasa ato amin'ny Global Voices :
Ny hoavin'i Mali ( Marc-André Boisvert )
Nanimba an'i Mali tanteraka ny zava-nitranga lavareny tamin'ny 2012: fikomiana toaregy , ny fanonganam-panjakana [mg], ny faharavan'ny Avaratry Mali sy ny fibodoin’ ireo vondrona Islamista izany sisitany izany [mg] , korontana ara-politika sy ara-miaramila tsy manam-pahataperana. Tao anatin'ny herintaona, voaloto tanteraka ny endriky ny fianakaviambe iraisam-pirenena modelin'ny demokrasia sy ny fampandrosoana an'i Mali, noho ity Firenena ity mikorontana, reraka ary navela irery.
Mali : fanombohan'ny fifampiraharahana miaraka amin'ireo Toaregy. Sary tao amin'ny Flickr, Magharebia (CC BY 2.0).
Herintaona izay, tao Mali, samy milaza izay tiany ny tao amin'ny twitter, facebook sy ny bilaogy. Tsy nisy ny resabe, ankoatra ny an'ireo kandidà amin'ny fifidianana filoham-pirenena mamolavola ny paikadin'izy ireo manokana, fifidianana izay tokony hotontosaina amin'ny volana marsa.
Tamin'ny taona 2012, nirohotra tao amin'ny tambajotra sosialy ireo Maliana. Mbola nahomby kokoa noho ny fampahalalam-baovao tsotra, nizara ny sarin'ireo famonoan'olona nataon'ireo Islamista ny mpiserasera tamin'ny alalan'ny tenifahatra #Mali  ary nifanakalo hevitra momba ny fitondrana vaovao, indrindra momba ireo hafatra “malilink”.
Nanentana ireo Maliana sy ny mpiara-dia aminy ny Fikambanan'ny Terak'i Mali Avaratra (COREN)  sy ny Cri de Cœur (Antso'ny Fo)  mba handefa fanampiana eny amin'ny faritra voakasika. Tsy fitaovana hizarana ny fidonanam-poana manoloana ny habibian'ny zava-mitranga intsony ny tambajotra sosialy, fa fitaovana handrindrana asa, hitsanganana sy hitsipahana izay tsy mety .
Tsia, tsy toy ny rafotsibe very laona ka miandry izay igadonany fotsiny ny Maliana ka hiandry fotsiny ny famonjen'ny any ivelany . Porofon'izany ny tranonkala.
Krizy mandalo sa fanovana ny fiarahamonina ?
Ny krizy ara-toekarena no lohahevitra nanjaka tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tao Frantsa tamin'ny taona 2012. Efa-taona tao anatin'ny krizy, lasa ihany ny saina fa sao tsy krizy mandalo no atrehintsika fa fiovan-drafitry ny fiaraha-monina sy ny fomba fiasany.
Maro ireo hevi-baovao nivoitra tamin'ny taona 2012 amin'ny fivoarana izay mety hizoran'ny fiarahamonina raha jerena ny zava-misy ara-toekarena ankehitriny. Manazava antsika ireo hevitra nifanakalozana momba ireo fanjohian-kevitra na vahaolana afaka hanova ny modely misy i Stanislas Jourdan. Anisan'izany ny fisantaran-kevitra fametrahana ny demokrasia mivantana momba ny karama ambany indrindra tsy misy fepetra ao Soisa :
Ny fisantaran'andraikitra malaza momba ny « fametrahana fidiram-bola fototra tsy misy fepetra » dia manolo-kevitra ny hametrahana ao anatin'ny Lalàmpanorenana federaly ny « fametrahana anjara vola ho an'ny rehetra tsy misy fepetra » mba «hahafahan'ny olona rehetra miaina ao anatin'ny fahamendrehana sy mandray anjara amin'ny fiainam-pirenena». Ny lalàna no handamina ny famatsiam-bola sy hametra ny tontalin'izany anjara vola izany. Tsy misy fepetra ny fidiram-bola fototra: tsy miankina aminà solom-panompoana (tsy misy tambiny) . [..] Ahoana no hamatsiana izany? Amin'ny alalan'ny hetra mivantana alaina amin'ny karama sy ny fananana, mbamin'ny hetra tsy mivantana amin'ny fandaniana (TVA), amin'ny alalan'ny hetra alaina amin'ny fifanakalozana ara-bola, ary indrindra amin'ny famindrana ireo vola natokana amin'ny famatsiam-bolan'ny AVS, AI, ny fiahiana ara-tsosialy ary ireo fidiram-bola hafa fanampiny kely noho ny fidiram-bola fototra.
Antony mampandrisika amin'ny asa, novolavolain'i Martouf, nahazoan-dalana avy aminy ny sary
Tetikasa hafa nosantarina tany Amerika Avaratra ny famafana ny trosan'ny fianakaviana sy ny mpianatra  amin'ny alalan'ny crowdfunding [fanampiana ifandrimbonana], tahaka ny ny fanampian'ny fanjakana ny banky mandritra ny krizim-bola (subprimes ) :
Ny fanaovana izany dia amin'ny alalan'ny famoronana vola taratasy tahaka ny fanao amin'ny politikam-panalefahana, fa mandeha mivantana any amin'ny kaontim-bolan'olo-tsotra io vola io, ka ny fepetra tokana amin'ny fampiasana ny vola dia ho fampihenana ny trosa. Ny trosan'ireo olona izay betsaka noho ny vola nampidirina tao amin'ny kaontiny ny trosany dia hihena ny trosany fa tsy voafafa, nefa etsy ankilan'izany, ireo tsy nitrosa kosa dia handray vola mivantana
Mpioko Tsy amin’ Antony?
Na ny mpiokon'ny M23 ao RDC, na ireo Séléka ao RCA na ny vondrona islamista ao Mali, tarataratra fa tsy manandratra firehan-kevitra politika mazava ary tsy misy fandrindran'asa iraisana koa eo amin'ny vondrona isan-karazany miara-miombona. Tsikaritra anefa nanitatra ny ambaindainy ireo vondrona mitam-piadiana ireo nandritra ny taona 2012 ary manana toerana tsy azo ihodivirana amin'ny fampandriana ny fandriampahalemana eo amin'ny faritra misy azy avy. Araka ny nomarihan'i Julie Owono, ny fotoana nanaovana ny fanafihana tany RCA  no mahatonga hieritreritra fa nanova zava-misy eo amin'ny tanjona fohy ezaky ny mpiokon'ny Séléka ny resa-bola. Tany RDC, noravahan'i Anna Gueye tamin'ny antsipirihany ny fahasarotana ara-tantaran'ny fiokoan'ny  [mg] M23 sy ny fivoarany faramparany  [mg]. Tsy lazaina intsony ny resa-bola any amin'ny faritra Kivu sy Katanga. Ny zava-baova nampalahelo tamin'ny 2012 dia hita ao amin'ny fiitaran'ny ady sy ny voina mahazo ny olona any amin'ny sisintany iraisana maro  izay ahitana hiha-mahery vaika ny herisetra. Miezaka mafy ireo fisantaran'andraikitry ny mponina mba hiarovana ny fahasalamana sy ny firindran'ny fiaraha-monin ‘ [mg] ireo mpiara-belona trotrak'ity fifandirana ity.
Avoaka tsy ho ela ny fizarana faharoa amin'ny tamberin'ny taona 2012 tao amin'ireo firenena mpiteny frantsay.
Anna Gueye , Julie Owono , Abdoulaye Bah , Marc-André Boisvert  ary i Stanislas Jourdan  no niara-nifandrimbona tamin'ny fanoratana ity lahatsoratra ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/01/11/44062/
 ady mita-piadiana tao Mali: https://fr.globalvoicesonline.org/2012/05/24/106811/
 Repoblika Demokratikan'i Kongo: https://mg.globalvoicesonline.org/2012/12/05/42464/
 Repoblika Afrika Afovoany: https://fr.globalvoicesonline.org/2012/12/27/132896/
 krizy ara-toekarena: https://fr.globalvoicesonline.org/2012/05/05/107126/
 mariazy ho an'ny rehetra: https://fr.globalvoicesonline.org/2012/12/18/132044/
 fikomiana toaregy: https://fr.globalvoicesonline.org/2012/03/21/102865/
 fibodoin’ ireo vondrona Islamista izany sisitany izany: https://mg.globalvoicesonline.org/2012/09/03/37894/
 Fikambanan'ny Terak'i Mali Avaratra (COREN): https://www.facebook.com/groups/260805417347348/?fref=tset
 Cri de Cœur (Antso'ny Fo): https://www.facebook.com/cridecoeurmali?fref=ts
 fitaovana handrindrana asa, hitsanganana sy hitsipahana izay tsy mety: https://fr.globalvoicesonline.org/2012/09/04/120433/
 famafana ny trosan'ny fianakaviana sy ny mpianatra: https://fr.globalvoicesonline.org/2012/10/22/125399/
 krizim-bola (subprimes: http://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_des_subprimes
 fivoarany faramparany: https://mg.globalvoicesonline.org/2012/12/22/43336/
 fiitaran'ny ady sy ny voina mahazo ny olona any amin'ny sisintany iraisana maro: https://globalvoicesonline.org/2012/12/18/increasing-risks-of-humanitarian-disaster-in-masisi-territory-of-dr-of-congo/